Uxolisile ‘umdlwenguli waku-Facebook’ | IOL Isolezwe
Uxolisile ‘umdlwenguli waku-Facebook’
Isolezwe / 15 August 2012, 3:20pm /
OWESILISA olahlwe amacala okudlwengula nokusoconga abesifazane uThabo Bester obedume ngele-”Facebook Rapist” umangaze abaningi izolo ngesikhathi exolisa ngezenzo zakhe zobugebengu kodwa wathi akazi ukuthi wayezenzelani.
UBester ukhulume okokuqala selokhu aboshwa ngezigameko zokuholela abesifazane oPhathe ngenkundla yezokuxhumana nobegcina ngokubadlwengula ababulale.
Lo mlisa ugwetshwe iminyaka engu-50 yinkantolo yaseThekwini ngonyaka odlule ngaphambi kokuthi iJaji ebelibambile, uJudith Cloete, wenkantolo yaseWestern Cape ngoMsombuluko emthole enecala lokudlwengula, ukuphanga intokazi eyayimodela ingunobuhle uNksz Nomfundo Tyhulu (23) .
Kuzo zombili lezi zinkantolo obekuqulwa kuzo amacala akhe utholwe enamacala okubulala nokuphanga abesifazane abesuke ebawaka ngenkundla yezokuxhumana ebethembisa nemisebenzi yokumodela esezingeni.
Izolo uBester uvele enkantolo ngenhloso yokuthi kuncishiswe isigwebo sakhe nalapho ebefakaza ngakho konke okwenzeka ngesikhathi ebulala uNksz Tyhulu.
Ethula ubufakazi uthe ngesikhathi ehlangana noNksz Tyhulu ngoJanuwari wangonyaka odlule waba nobudlelwane obuhle obaholela ukuthi basondelane ngendlela engachazeki.
Uthe bake bahambela eKapa ngoSepthemba, baqasha nendawo yokulala, okuyinto eyenzeka ngaphambi kokuthi kuqubuke ingxabano eyasuka ngaphambi kokuthi balale.
Eqhuba uthe ezintathakusa wavuka waqonda ekhishini nalapho afika wathatha ummese ngenhloso yokuthi akwazi ukuthatha i-laptop neselula kaNksz Tyhulu.
Ngesikhathi ephendula imibuzo kammeli wakhe uPeter Burger, uBester ukhombise ukuzisola ngezinto azenza.
“Namanje angikwazi engangikwenza futhi ngizimisele ukuthwala izono zami. Ngaphandle kwalokho ngizizwa njengomuntu ongazi ukuthi wayenzani ngaleso sikhathi ikakhulukazi ngalesi sigameko saseKapa,” kusho uBester.
Ubekusho lokhu ekugcizelela ukuthi uNksz Tyhulu wayengumngani omkhulu wakhe kangangokuthi naye wayekholelwa kuye.
UBester ubuye wathi konke ayekwenza wayephoqwa yingcindezi ngenxa yokungabi namali yokuthi anakekele izingane zakhe ezintathu azithole komama abehlukene ezinezinyanga ezingu-18, eneminyaka emibili neneminyaka eyisikhombisa.
Emibuzweni abephonswa yona ngokuthi kungani abulala uNksz Tyhulu, uthe akazi ukuthi wayekwenzelani lokhu futhi uyaxolisa ngoba wayengakuhlelile kodwa kwazenzakakela nje.
UBester kuvela nokuthi wake waboshwa eneminyaka engu-17 ngenxa yakho ukweba nokuhlupha kodwa inkantolo yamnikeza isigwebo sokuthi agadwe ngunina ngoba iminyaka yayingamvumeli ukuthi aboshwe.
UMmeli kaBester uthe kumele ehliselwe isigwebo sakhe ngoba usemncane futhi nezingane zakhe zisencane.
Uzogwetshwa kusasa eKapa.